ဖောင်ကြီးကုသရေးစင်တာမှာ အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်ပဲ လူနာတွေကို ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းအမှား - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
ကိုဗစ်နိုင်တင်းလူနာတွေကိုကုသပေးနေတဲ့ ဖောင်ကြီးကုသရေးစင်တာမှာ လူနာတွေကို ဆရာဝန်တွေက ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပဲ ထိုင်ကြည့်နေရပြီး လူနာတွေအတွက် အောက်ဆီဂျင်လည်း မလုံ‌လောက်တဲ့အကြောင်း ဖောင်ကြီးက ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကရေးသားတယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီပို့စ်မှာ “အရမ်းမျှော်လင့်နေကြမှာစိုးလို့တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး…ဖောင်ကြီးမှာ ခုတင် ၂၀၀၀ ဆံ့ပါတယ်၊ အဲ့ခုတင်ပေါ်မှာ လူနေလို့ရပါတယ်၊ လူနာနေလို့မရပါဘူး positive ဖြစ်တဲ့လူတွေဟာ နောက်ဆုံး အောက်ဆီဂျင်ကျ၊ ပြင်းထန်အဆုတ်ယောင်ရောဂါနဲ့ သေကြပါတယ်၊ အောက်ဆီဂျင်ရှိတဲ့ အဆောင်က ၂ ဆောင်ပဲရှိပါတယ် အဲ့ ၂ ဆောင်မှာမှ အောက်ဆီဂျင်ပိုက်လိုင်းရှိတဲ့ အခန်းတွေက ၅၀ တောင်မပြည့်ပါဘူး အရမ်းအောက်စီဂျင်ကျပီး အထူးကြပ်မတ်ဆောင်ပို့ရရင်လည်း အဲ့မှာ ၁၇ ခုတင်ပဲရှိတာပါ၊ ဆေးရုံဖွင့်ပြီး ဘယ်လိုကုနေတယ်ထင်ပါသလဲ? ဖျားရင်ပါရာစီတမောပေးပါတယ် ချောင်းဆိုးရင်ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး ပေးပါတယ်၊ ကိုယ်ခံအားလေးများကောင်းလာမလားဆိုပီး vitaminC ပေးပါတယ်၊ အောက်ဆီဂျင်ကျပီး အဆုတ်က ဓာတ်မှန်မှာမွထနေရင် အဆုတ်ကို ဆက်မပျက်စီးလောက်ပါဘူး လို့ထင်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးတွေ ထိုးပါတယ် ဒါပေမဲ့သေကြပါတယ်….ထုံးစံအတိုင်းပေါ့…. cctv ကနေကျွန်မ သေချာစောင့်ကြည့်နေပါမယ်” စသဖြင့် ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေရာ ဒီနေရာ ဒီနေရာ တွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်တွေက မှားယွင်းနေတဲ့အကြောင်းကို ဖောင်ကြီး COVID – 19 ကုသရေးစင်တာ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး (၃)ဖြစ်သူ ဦးမျိုးမြင့်က သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောက်ကနေ “အပြင်မှာ သတင်းထွက်သလိုမဟုတ်ဘဲ ဖောင်ကြီးမှာ အောက်စီဂျင်အလုံအလောက်ရှိတဲ့အကြောင်းအများသိစေရန် Covid-19 Medical Center (Phaung Gyi) Oxygen Plant နှင့်ပတ်သက်သည့် ဓါတ်ပုံ တင်ပြချက်များမှတ်တမ်း (ICU အပါအဝင် ကုတင် ၂၇၇ လုံးစာ Oxygen အဆင်သင့်ပါ)”လို့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ပြည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ စံတော်ချိန်သတင်းဌာနရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဦးမျိုးမြင့်က “ဒါက သတင်းအမှာပါ လူနာနှစ်ထောင်ဆိုကတည်းက မှားနေပြီ တကယ်တမ်းဖောင်ကြီးမှာက လူနာ ၁၂၂၀ပဲဆံ့တာပါ၊ ဒုတိယတစ်ချက်က အောက်ဆီဂျင်ပေးတာ ၅၀လောက်ပဲလို့ပြောတာက တကယ်တမ်း သရဖီနဲ့ ခွာညိုဆောင်မှာတင် ၂၄၀ လောက်အောက်ဆီဂျင် ပေးလို့ရပါတယ်၊ အဲ့အပြင် ICUမှာလည်း ၃၇ယောက် ပေးလို့ရပါတယ်”လို့ ပြန်လည်ဖြေဆိုထားပါတယ်။အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်လက်တွေအရ ဖောင်ကြီးကုသရေးစင်တာမှာ အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်ပဲ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ လူနာတွေကို ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းဟာ သတင်းအမှားဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Title:ဖောင်ကြီးကုသရေးစင်တာမှာ အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်ပဲ လူနာတွေကို ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
Tagged HealthyMyanmarPhaunggyi Covid-19 CenterSocial MediaYangon